Ndekọ ọnụ ọgụgụ iji kwado ịre ahịa ọdịnaya | Martech Zone
Ndekọ ọnụ ọgụgụ iji kwado ịre ahịa ọdịnaya
Satọde, Satọdee 28, 2013 Sọnde, Septemba 29, 2013 Douglas Karr
Anyị na-arụkọ ọrụ na ndị folks nwere nsogbu ịghọta uru nke ahịa ọdịnaya. Ha nwere ike na-akpọsa na ọdịnala ọdịnala ma ọ bụ na-azụ ahịa na otu ndị otu ọpụpụ dị egwu. Ọ bụ ezie na anyị anọghị n'ụzọ ọ bụla megide nke ahụ, ego ahụ dị iche. Na mgbasa ozi, ndị na-ege ntị nwere onye ọzọ ma ị na-akwụ ụgwọ ego iji nweta ndị na-ege ntị. Not bụghị ikike ma ọ bụ isi mmalite a tụkwasịrị obi, ha bụ. Na ahia ọpụpụ, ọnụego gị ga-adaba na ogo ahịa ị chọrọ. Salesre ahịa karịa na-achọ ọtụtụ mmadụ (ma ọ bụ ndị dị oke ọnụ).
Ahịa ọdịnaya dị ka itinye ego ego ọ bụla ị ga-eme. A na - azụta ọdịnaya ma ọ bụ mkparịta ụka ọ bụla maka ọdịnihu gị. Ka ị na-eto eto ahịa ọdịnaya gị, itinye ego na-eto. Kwa ọnwa, ị na-enwekwu ọdịnaya na-arụ ọrụ maka gị iji wulite ntụkwasị obi, ikike na ndị na-ege gị ntị ma ọ bụ obodo. Mgbe obere oge gachara, ndị obodo n’onwe ha ga-ebido ịrụ ọrụ n ’ihu ọma gị karịa ịre ahịa.
Uskwado itinye ego maka ogologo oge chọrọ ụfọdụ stats siri ike, agbanyeghị, na Smart Insights rụzuru nke ahụ. Budata ha na-eduzi na ndebiri maka ịme azụmahịa maka itinye ego na azụmaahịa dijitalụ maka uzo ozo - na otu esi emeri esemokwu nke obi. Nke a bụ ụfọdụ stats na-akwado ha gbakọtara:
Tags: content Marketingntinye ego nke ọdịnayaizi ezi nke ọdịnaya ọdịnayaihe kpatara ahia ahia